Iindaba - Uyikhetha njani kwaye uyisebenzisa njani iToilet yangasese yeKati
Uyikhetha njani kwaye uyisebenzise njani indlu yangasese yeKati ezenzekelayo
Zeziphi ezona Bhokisi zeLitter zokuCoca eziPhambili?
Ukufumana eyona bhokisi yokulahla ikati ezenzekelayo yekati yakho kufuna ukufumana ibhalansi phakathi kweempawu ozifunayo kunye nekati yakho ekhululekile ngayo. Ezinye iikati zinokuthintelwa okanye zichithwe yingxolo enkulu, ke ibhokisi yenkunkuma eyenzelwe ukuba isebenze ngokuzolileyo okanye ilibazise i-raking de ikati ihambile kunokuba ngcono. Ezinye iikati zinokukhetha indawo eyongezelelweyo, ke kuyakufuneka ujonge ibhokisi yenkunkuma ezenzekelayo egumbini elingaphezulu.
Ukuba unayo ikati, kuya kufuneka ulinde. Abavelisi bathi iibhokisi zenkunkuma zenzelwa iikati ezindala kuneenyanga ezi-6. Ngenxa yobukhulu bamantshontsho ekati, zinokukhanya kakhulu kwiimvakalelo okanye zincinci kakhulu ukuba zingakhwela kwezinye iiyunithi, okanye zinokutya nenkunkuma. Xa ikati yakho ifikelela kubunzima obaneleyo, ibhokisi yenkunkuma iya kudlala indima yayo kubomi bekati
Ukwenza iShift kwiBhokisi yoLuhlu oluzenzekelayo lweKati yakho
Zonke iibhokisi zenkunkuma ezizenzekelayo zifuna ixesha lotshintsho. Zonke iitoti ezizenzekelayo zifuna ixesha lotshintsho. Ngokubanzi, kuhlala kuthatha ixesha lokufumana ikati ukuze iqhelane nento entsha, kwaye kuyafana nokusebenzisa ibhokisi yenkunkuma ezenzekelayo. Kwaye abantu banendawo yokufunda yokufunda, ukugcwalisa inkunkuma kwixabiso elichanekileyo, jonga kuyo rhoqo, uxazulule iingxaki, njl.
Ke ngoko, xa usebenzisa i-E Automatic Cat Litter Box yeekati, nikela ingqalelo ekhethekileyo kweli xesha lotshintsho, kungenjalo iya kuba yinto engenziwanga.
Xa useta okokuqala ngqa, sihlala sicebisa ukuba iiyunithi zingagxothwa okanye zikhutshwe 'kude' de ikati ilisebenzise rhoqo. Ngelixa usenza olo tshintsho, kungcono ukugcina ibhokisi yenkunkuma yemveli kufutshane de ikati ibonise ukhetho olucacileyo kwibhokisi ezenzekelayo.